वित्तीय विकल्पहरूको साथ ठाडो फैलाउने रणनीतिहरू | आर्थिक वित्त
वित्तीय विकल्पहरू सहित ठाडो फैलाउने रणनीतिहरू, भाग २
हामीले भर्खरै केहि बारे ब्लगमा टिप्पणी गरिरहेका थियौं वित्तीय विकल्प संग रणनीतिहरु. विकल्प बजार सबैभन्दा गतिशील मध्ये एक हो यसको प्रकृति को कारण। वर्णन गरिएका केही रणनीतिहरू कभर्ड कल, म्यारिड पुट र स्ट्र्याडल थिए। यी केवल केहि अस्तित्वमा रहेका धेरै हुन् र जसले हामीलाई वित्तीय बजारहरूले हामीलाई प्रस्ताव गरेको सम्भावनाको फाइदा लिन र फाइदा लिन अनुमति दिन्छ। तर यस लेखमा हामी विभिन्न स्ट्राइक मूल्यहरूसँग "खेल" गर्न ठाडो स्प्रेडहरूमा छुनेछौं।
यस दोस्रो भागमा, इरादा केहि थप समीक्षा गर्ने हो, र ती मा खोज्नु हो कि तिनीहरूको विशेषताहरु को कारण केहि अधिक जटिल हुन सक्छ। किनभने लेखको क्रमलाई पालना गर्न सल्लाह दिइन्छ, को एक मार्फत जाँदै वित्तीय विकल्प, र त्यसपछि तपाइँ यहाँ नपुगेसम्म विकल्पहरू सहित रणनीतिहरूको पहिलो भाग मार्फत जारी राख्नुहोस्। यस बिन्दुमा, म आशा गर्दछु कि हामीले देख्न लागेका नयाँ रणनीतिहरू पनि तपाईंको लागि व्यावहारिक र उपयोगी हुनेछन्।
1 बुल कल स्प्रेड
1.1 भालु कल स्प्रेड
2 भालु राख्नुहोस् स्प्रिड
2.1 बुल पुट स्प्रेड
3 आइरन कन्डोर रणनीति
3.1 रिभर्स आइरन कन्डोर
4 ठाडो फैलावट बारे निष्कर्ष
बुल कल स्प्रेड
यो रणनीति ठाडो स्प्रेड भित्र समावेश छ। यसमा एउटै सम्पत्ति र एउटै म्याद सकिने मितिका लागि दुईवटा कल विकल्पहरू एकैसाथ किन्ने र बेच्ने समावेश हुन्छ, तर फरक स्ट्राइक मूल्यहरूसँग। सबैभन्दा कम स्ट्राइक मूल्यमा खरिद गरिन्छ र उच्चतम स्ट्राइक मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। यो विकल्प रणनीति लगानीकर्ता उत्साही हुँदा लागू हुन्छ एक सम्पत्ति मा।
हानि र लाभ दुवै सीमित छन्, र तिनीहरू हामीले स्ट्राइक मूल्यहरू राख्ने दूरीमा निर्भर गर्नेछन्। परिस्थितिहरूमा जहाँ सम्पत्तिमा ठूलो अस्थिरता हुन्छ, त्यहाँ प्रायः रोचक लाभ / जोखिमका अवसरहरू हुन्छन्।
भालु कल स्प्रेड
यो रणनीतिमा बाहेक यो अघिल्लो रणनीति जस्तै हो बेचेको कल भनेको सबैभन्दा कम स्ट्राइक मूल्य भएको कल हो, र खरिद गरिएको कल उच्चतम स्ट्राइक मूल्य संग एक हो।
भालु राख्नुहोस् स्प्रिड
Bear Put Spread रणनीति अघिल्लो जस्तै छ, यो पटक मात्र लागू हुन्छ जब लगानीकर्ताले सोच्दछ कि त्यहाँ सम्पत्तिमा कमी हुन सक्छ। उद्देश्य घाटा सीमित गरेर लाभहरू सीमित गरेर ड्रपहरूको फाइदा उठाउनु हो। यसको लागी एउटा पुट किनिन्छ र अर्को एकैसाथ बेचिन्छ समान परिपक्वता र सम्पत्तिमा, तर फरक व्यायाम मूल्यको साथ। किनेको पुट उच्चतम स्ट्राइक मूल्य भएको र बेचेको पुट सबैभन्दा कम स्ट्राइक मूल्य भएको हो।
अधिकतम मुनाफाको आकांक्षा गर्न सकिने दुबै व्यायाम मूल्यहरू बीचको मूल्य भिन्नता हो जुन भुक्तानी गरिएको प्रिमियम र सङ्कलन गरिएको प्रीमियम बीचको भिन्नता हो। अर्कोतर्फ, अधिकतम घाटा भुक्तान गरिएको प्रिमियम र संकलन गरिएको प्रिमियम बीचको भिन्नता हो।
अर्कोतर्फ, र उही शिरामा, हामी अघिल्लो रणनीति भित्र खरिद र बिक्री अर्डर उल्टाउन सक्छौं। त्यसोभए साँढेको साथ फैलियो, उच्चतम स्ट्राइक मूल्य संग पुट बेचिनेछ, र अर्को कम व्यायाम मूल्य संग खरिद गरिनेछ। यसरी, हामी "नाफा" मा सुरु गर्नेछौं र मूल्य घट्यो भने मात्र हामी घाटामा प्रवेश गर्नेछौं, जुन कम स्ट्राइक मूल्यमा पुट खरिद गरेर सीमित हुनेछ।
आइरन कन्डोर रणनीति
यो रणनीति ठाडो स्प्रेडहरू भित्र विकल्प बजारमा सबैभन्दा उन्नत मध्ये एक हो। धन्यवाद उत्पन्न भएको छ चार विकल्प, दुई कल र दुई पुट। यसको डेल्टा तटस्थ छ र Theta सकारात्मक छ, अर्थात्, यसले काम गर्ने दायरा भित्र मूल्य परिवर्तनबाट प्रभावित हुँदैन। यद्यपि, उनको लागि धेरै सकारात्मक कुरा समय कारक हो, किनकि यसले हाम्रो फाइदाहरू बढाउँछ। त्यसैगरी, यदि हामीले उच्च अस्थिरताको समयमा प्रवेश गरेका छौं, र पछि यो तल जान्छ, विकल्पहरूको मूल्य थप घटाउँछ, यो फाइदाको अन्त्य हुने कुरा हो।
वित्तीय विकल्प, कल र पुट
यसलाई व्यवहारमा राख्नको लागि, सबै विकल्पहरू एउटै म्याद सकिने मितिमा हुनुपर्छ। त्यसपछि, पहिलो स्ट्राइक मूल्य सबैभन्दा कम र अन्तिम उच्चतम हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै (TO यो निम्नानुसार बनेको छ।
A. स्ट्राइक मूल्य A (तल्लो मूल्य) भएको पुटको खरिद।
B. B स्ट्राइक मूल्यको साथ पुट बेच्नुहोस् (केहि हदसम्म बढी)।
C. व्यायाम मूल्य C (उच्च) संग कल को बिक्री।
D. D स्ट्राइक मूल्य (उच्चतम) संग कल खरिद गर्दै।
वास्तवमा, यो रणनीति बियर कल स्प्रेड र बुल पुट स्प्रेडको संयोजन हो। स्ट्राइक मूल्यहरूबाट दूरीमा निर्भर हुने दायराको अवधिमा हामी नाफामा हुनेछौं। यदि मूल्य बढ्छ वा हाम्रो स्थिति भन्दा पर खस्छ भने मात्र हामी घाटामा प्रवेश गर्नेछौं, यद्यपि तिनीहरू हामीले गरेका खरिदहरू द्वारा सीमित हुनेछन्।
रिभर्स आइरन कन्डोर
Es बुल कल स्प्रेड प्लस बियर पुट स्प्रेडको संयोजन। ४ वटा विकल्पको खरिद बिक्रीमा पालना गर्नुपर्ने आदेश पूर्णतया विपरित छ । सुरुमा हामी घाटामा "सुरुवात" गर्थ्यौं, जुन दायरा भित्र रहनेछ जहाँ हामीले हाम्रो खरिदहरू गर्यौं। जसरी मूल्य यस क्षेत्रबाट निस्कन्छ र बढ्छ वा घट्छ, लाभहरू साकार हुनेछन्।
उल्टो आइरन कन्डोरमा सम्भावित लाभहरू उच्च छन्, यद्यपि तिनीहरू पनि कम सम्भावना छन् किनभने हामी घाटाबाट सुरु गर्छौं, र थोरै मूल्य भिन्नताहरूको घटनामा यी लाभहरू हासिल हुने छैनन्।
ठाडो फैलावट बारे निष्कर्ष
ठाडो स्प्रेड रणनीतिहरूले राम्रो नतिजा दिन्छन् यदि सम्पत्तिको मूल्यमा लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरेको व्यवहार छ भने।2वा बढी विकल्पहरूको संयोजन भएकोले, यो सम्भव हुन सक्छ कि त्यहाँ विकल्पहरू व्यापार गर्दा भ्रम छ। उदाहरणका लागि, बिक्री गर्नुको सट्टा किन्ने अन्त्य गरौं। धेरै दलालहरूले सम्भावना प्रस्ताव गर्छन् व्यापार गर्नु अघि हाम्रो रणनीतिहरु को परिणामस्वरूप ग्राफ को अवलोकन गर्नुहोस्, यसले हामीलाई हामीले चाहेको कुरा हो कि भनेर हेर्न मद्दत गर्छ। थप रूपमा, तिनीहरूले हामीलाई रिटर्न / जोखिम र सम्भाव्यताहरू हेर्न अनुमति दिन्छ जुन हामी अधिकतम नाफा वा हानिमा पुग्न सक्छौं।
मेरो सुझाव छ कि तपाईले केहि समय लिनुहोस् सञ्चालनहरू राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुहोस्, ताकि तिनीहरू अनुकूलित गर्न सकिन्छ, मानक त्रुटिहरू कम गर्नुहोस् र सम्भावित नाफा अधिकतम गर्नुहोस् र घाटा कम गर्नुहोस्। मलाई आशा छ कि यस लेखले तपाईलाई विकल्पहरूको साथ ठाडो स्प्रेड रणनीतिहरूसँग परिचित हुन मद्दत गरेको छ!
वित्तीय विकल्पहरु संग रणनीतिहरु, भाग १
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बोल्सा » वित्तीय विकल्पहरू सहित ठाडो फैलाउने रणनीतिहरू, भाग २
मोडेल 390: यो के को लागी हो?
बिल गेट्स उद्धरण